PPV 5 WWE no nahavita tamin'ny taona 2018 - Wwe
PPV 5 WWE no nahavita tamin'ny taona 2018
Ny fizarazarana marika dia nitranga tamin'ny taona 2016. Tsy nopetahana intsony ny fizarana SmackDown satria nahazo marika superstar sy karama isan-karazany ny marika manga. Ny orinasan'ny Vince McMahon dia nanangona ny isan'ny PPVs taorian'ny fizarana marika. Satria i RAW sy SmackDown dia nanana manokana manokana marika manokana ankoatry ny Big 4, ny WWE Universe dia nahazo PPV isaky ny 15 andro.
manan-janakavavy ve ny lefona britney?
Fikomiana be loatra izany tsy hojerena ary hanampiana bebe kokoa amin'ny olan'ny mpankafy saika ny antsasaky ny fampisehoana B (tsy mijoro tsara i B eto) dia misy famerenana na fifandirana mankaleo. Tsy hitan'ireo mpankafy fa mahaliana ilay foto-kevitra, ary ny orinasa dia nanandrana nanapaka ny isan'ny seho hatrizay.
Tsapan'ny WWE ny hadisoany ary nofoanana ireo PPV tsy misy marika. Hatramin'ny taona 2018, ny karama-isan-jotra rehetra dia marika roa ary indray mandeha isam-bolana. Ity hevitra ity koa dia manana fetrany manokana satria natao ambanin-javatra ny karatra ambany sy ambany karatra.
WWE dia nanapaka ny PPV-ny tamin'ny taona 2018 izay nitarika ny orinasa hamarana hetsika 5 tsy misy marika.
# 1 WWE Payback
Poster WWE Payback 2017
WWE dia nanolotra ny Payback PPV tamin'ny taona 2013 ary nanomboka teo dia endrika mahazatra ao amin'ny tambajotra hatramin'ny 2017. Ny hetsika dia nanolo ny No Way Out tamin'ny volana Jona 2013 fa taorian'izay dia nampiasa azy io WWE ho toy ny karama aorian'ny WrestleMania. Hetsika manokana RAW io tamin'ny taon-dasa ary tokony ho hetsika tokana SmackDown tamin'ny volana Mey lasa teo saingy nofoanan'ilay orinasa ilay seho.
Payback 2014 no tambajotra manokana natokana farany izay nandraisan'ny The S.H.I.E.L.D ny lalao ekipa tag enina olona, ​​haintany iray izay nifarana tamin'ny WWE Super Show-Down. Ny andiany 2015 dia niaro an'i Seth Rollins niaro ny Tompondakan'i WWE World Heavyweight tamin'ny lalao 4 nandresy tamin'ny rahalahiny S.H.I.E.L.D teo aloha Roman Reigns sy Dean Ambrose. Ny superstar faha-4 tamin'ny lalao dia ny Viper Randy Orton.
Ao anatin'ny roa taona manaraka, Payback lohateny lehibe an'ny Big Dog Roman. Raha niaro ny anaram-boninahitra World Heavyweight nanoloana an'i AJ Styles tamin'ny 2016 izy dia resin'i Braun Strowman tamin'ny hetsika lehibe 2017.
Nahoana cheaters mamitaka hatrany hatrany
ohatra momba ny zava-misy mahafinaritra momba ahy
naninona no naato i eva marie
ny zavatra tsara indrindra tokony hatao rehefa mankaleo anao